ပါပါပဏထီဥ သီခါကရ႕ႈခိဥအသီတဂၚ ဖဲအ့ဥဒိဥနံရွါ စၚကါအူၚ တႈအိဥဖွိဥအပူၚန႔ဥလီၚ. | Radio Veritas Asia
ပါပါပဏထီဥ သီခါကရ႕ႈခိဥအသီတဂၚ ဖဲအ့ဥဒိဥနံရွါ စၚကါအူၚ တႈအိဥဖွိဥအပူၚန႔ဥလီၚ.
သီခါ Father Valentinus Saeng, CP ဘဥတႈဃုထ႕အီၚလ႕ ပါပါျဖဥစ့ဥစ္ လ႕ကဟံးန႔ႈမူဒါလ႕ သီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Julius Menccucini, CP အလီႈ လ႕ကကဲထီဥသီခါကရ႕ႈခိဥ ဖဲ အ့ဥဒိဥနံရွါ Sanggau Diocese in West Kalimantan, Indonesia တႈလီႈန႔ဥလီၚ.
ဖဲ မံဆါအတီႈပူၚဖဲ လါဎူၚ ၁၈ သီ စၚကါအူၚ တႈဘါသရိဏဖးဒိဥ သီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Menccucini စံး၀ဲ ပွၚဘါဎြၚဖိတဖဥ လ႕ အဘဥဃးဒီးသီခါကရ႕ႈခိဥအသီအံၚန႔ဥလီၚ. အ၀ဲစံး၀ဲလ႕ အဒိးန႔ႈဘဥ လံဏပရ႕လ႕ ဘဥတံၚကဥ အရူ ကီႈအ့ဒိဥနံရွါ အခ႕ဥစး လ႕အဆွ႕၀ဲဆူ အ့ဒိဥနံရွါ သီခါကရ႕ႈခိဥဖးဒိဥ Mgr. Piero Pioppo အအိဥန႔ဥလီၚ.
လ႕အလံဏတႈကြဲးအပူၚန႔ဥ စံး၀ဲလ႕ ဎအဲဥဒိးဒုးသ့ဥညါနၚ ဒီးဃ့နၚလ႕ နကဒုးသ့ဥညါ တႈအိဥဖွိဥလ႕ အ့ဥဒိဥနံရွါ လ႕ပါပါျဖဥစ့ဥစ္ ပဏထီဥ၀ဲ Father Valentinus Saeng CP လ႕အအိဥဖ်ဲဥ၀ဲဖဲ Borneo ဒီးမၚန႔ႈ၀ဲအတႈမၚလိဘဥဃး ဒီး Philosophy and Theology (STFT) Widya Sasana ဖဲ Malang ဒ္အကမ့ႈ သီခါကရ႕ႈခိဥအသီတဂၚ ဖဲ စဥန္ကဥအူၚ လ႕ကဟံးန႔ႈက့ၚသီခါကရ႕ႈခိဥအလီႈလံၚအလီႈ န႔ဥ ဒီးလံဏအံၚဘဥတႈဖးဖ်ါထီဥအီၚဖဲ Sanggau Cathedral န႔ဥလီၚ.
လ႕တႈကြဲးအပူၚန႔ဥ ပါပါစံး၀ဲလ႕ ဖဲဎဆ႕တဲဏတႈအံၚန႔ဥ ဎသးခုဃုဏဒီးနၚယ သီခါတဖဥယ ဖံ၀ါတဖဥ ဒီးပွၚဘါဎြၚဖိခဲလ႕ဏ ဖဲစဥကဥအူၚ ဒီးဎဃ့လ႕ မ္သုကဃ့ထုကဖဥန႔ႈ လ႕တႈဃုထ႕ထီဥ သီခါကရ႕ႈခိဥ အသီအံၚ ဒီးတူႈလိဏအီၚဒ္သုပွၚကြႈသိတဂၚန႔ဥတက့ႈ.
Nuncio စံး၀ဲလ႕ ပါပါန႔ဥ အိဥဒီးတႈပဏလုႈပဏပွ႔ၚတႈဎူးဎီဥ ဒီးတႈစံးဘ်ဳးလ႕ သီခါကရ႕ႈခိဥလီႈလံၚ Bishop Menccucini လ႕အတႈမၚဂ့ၚ ဟ့ဥလီၚအသးသ့ဥတဖဥအဖီခိဥန႔ဥလီၚ.
ပါပါပဏထီဥသီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Menccucini အံၚ အ၀ဲမၚဒိဥထီဥလဲၚထီ၀ဲဒဥ စဥကဥအူၚ ကဲးသလံးတႈ အိဥဖွိဥ ဖးအါန႔ဥလီၚ.
ပါပါစံး၀ဲလ႕ နတႈသ့တႈဘဥယ နတႈစူႈတႈနဏ နီႈသးအတႈဟ့ဥယ တႈမၚတႈလ႕ ဟ့ဥလီၚသးလ႕ တႈအိဥဖွိဥ အဂီႈ ဒီး နတႈထုးစုနဲဥက်ဲန႔ဥ ဒုးဒိဥထီဥ၀ဲဒဥ စဥကဥအူၚ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥ ဒီးတႈသူဥထီဥအဒိဥ အအါ တဖဥန႔ဥလီၚ.
စဥကဥအူၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလီႈလ႕ အအိဥလ႕ province of West Kalimantan တကပၚန႔ဥလီၚ.
ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥအံၚ ဘဥတႈဒုးအိဥထီဥအီၚဖဲ လါဎူၚ (၈) သီ ၁၉၈၂ အနံဥ န႔ဥလီၚ. ဒီးမ့ႈတႈအိဥဖွိဥလ႕ အအိဥလ႕ province of the Archdiocese of Pontianak အဖီလဏန႔ဥလီၚ.
Indonesia: Pope appoints new bishop for Diocese of Sanggau, RVA News, 20 June 2022
လ႕ကဲးသလံး တႈအိဥဖွိဥ ကရ႕အပူၚ ကဥဒံဥနဲဥ သ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ တႈအရ့ဒိဥ အကါဒိဥ၀ဲ အဂ့ႈ တႈကစီဥ
ပႈပါ ဃုထ႕ ပဏထီဥ၀ဲ ကဥဒံဥနဲဥအသီ ၂၁ ပါ အက်ါ ပဏထြဲဃုဏ၀ဲဒီး ကီႈအ့ရွ႕ဥဖိ (၆) ဂၚအဂ့ႈ တႈကစီဥ